Nagu saabsan | Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd.
Mabda'eena: Tayada Koowaad, Qiimaha wanaagsan, Adeegga Xirfadlayaasha
Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, waxaa la aasaasay 2013, oo ku taal magaalada Zhangjiagang, waxay ku takhasustay soo saarista iyo iibinta foornada foornada celisa iyo bacriminta, PU elastomer iyo Ethyl Silicate. Waxyaabaha our waxaa si weyn loo isticmaalaa in PVC, xumbo PU, buufiyo polyurea qalabka biyuhu, qalabka go'doomin kaamerada, koollo, daahan iyo qashin iwm Waxaan ku aasaasay afar dhirta OEM ee Liaoning, Jiangsu, Tianjin, Hebei & Guangdong gobolka. Bandhigga warshad ee ugu fiican iyo khadka wax soo saarka ayaa naga dhigaya inaan u dhigno dhammaan macaamiisha baahida loo habeeyay. Dhamaan warshaduhu waxay si adag ugu hogaansamaan xeerarka cusub ee deegaanka, badbaadada iyo shaqada kuwaas oo sugaya sahaydeena waara. Waxaan mar hore dhammeynay EU REACH, Korea K-REACH diiwaangelin buuxda iyo Turkey KKDIK horay u diiwaangelinta alaabadayada waaweyn.
Wadarta guud ee waxsoosaarka sanadlaha ayaa ka badan 20,000ton. 70% awooddeenu waxay u dhoofineysaa caalamka Aasiya, Yurub, Waqooyiga Ameerika, Bariga Dhexe, S. America iwm. Qiimaha sanadlaha ah ee aan dhoofino wuxuu ka badan yahay $ 16 milyan. Iyada oo kuxiran hal-abuurnimo iyo adeegyo xirfadle ah, waxaan hubineynaa inaan siinno alaab tayo iyo tartan u leh dhammaan macaamiisheenna.
Waxaan leenahay koox maareyn xirfadlayaal ah iyo farsamo yaqaanno in ka badan 10 sano khibrad u leh berrinka kiimikooyinka wanaagsan si ay u bixiyaan adeegyo farsamo oo ka wanaagsan. Shirkadeena saadka gaarka ah waxay naga dhigeysaa inaan siino xalka ugu fiican ee adeega saadka oo aan u kaydino macaamiisha.
Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd waxay leedahay koox farsamo oo xoog leh warshadaha, tobanaan sano oo khibrad xirfadeed ah, heer naqshadeyn heer sare ah, abuurista tayo sare leh qalab caqli badan.Waxaan adeegsanaa nidaamyo naqshad casri ah iyo adeegsiga sareynta maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9001. system management. Shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarida qalab waxqabad sare leh, xoog farsamo oo xoog leh, awoodaha horumarineed ee xoogan, adeegyo farsamo oo wanaagsan.Waxaan ku adkeysaneeynaa tayada wax soo saarka oo aan si adag u xakameynaa geeddi socodka soo saarista, oo ay ka go'an tahay soo saarista dhammaan noocyada.Waxay horay u tahay -sale ama iibka kadib, waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican si aan kuu ogeysiinno una adeegsanno badeecadeenna si ka dhakhso badan.
Products Hordhac Kooban
Wakiilka De-hawada / dheellitirka ku leh qashin-qubka, maqaarka iyo dahaadhka derbiga
Sifeeyaha qashinka iyo qodista saliidda
Elastomer ee PU; daweynta wakiilka Polyurea & epoxy resinU
Elastomer ee PU; daawo ku daaweynaya Polyurea & epoxy cusbi
Tris (2-chloropropyl) fosfate (TCPP)
Daahida ololka ee xummada adag ee PU iyo thermoplastics
Daahida ololka ee heerkulbeegga, xumbo adag PET & PU
Tris (2-chloroethyl) fosfate (TCEP)
Dib-u-dhaca ololka ee maadada phenolic iyo polyvinyl chloride
Midab ka-hortagayaasha fiilooyinka iyo polymerka kale; Soosaarida sunta cayayaanka & dawooyinka
Phosphate Tricresyl (TCP)
Wakiilka ka-hortagga duugga ah ee dareeraha nitrocellulose iyo saliidda saliidda
Dib-u-haynta ololka ee caag-gacmeed, PVC iyo fiilooyin
Tris (1,3-dichloro-2-propyl) fosfate (TDCP)
Xakamaynta ololka ee xaydha PVC, epoxy resin, cusbada phenolic iyo PU
Phohenfa Triphenyl (TPP)
Dib-u-dhaca ololka ee amooniyam / acetate iyo cusbada vinyl-ka
Xidhmooyinka ku jira rinjiyeyaasha ka hortagga waxyeellaynta badda iyo tuurista saxda ah